भारतको सिमा रक्षा गर्दा गर्दै जम्मु-कास्मिरमा अ’स्ता’ए सम्बुर गुरूङ, मनमा अलिकति दया माया छ भने RIP लेख्नुहोला ! - Sano Aawaj
भारतको सिमा रक्षा गर्दा गर्दै जम्मु-कास्मिरमा अ’स्ता’ए सम्बुर गुरूङ, मनमा अलिकति दया माया छ भने RIP लेख्नुहोला !
१७ आश्विन २०७८, आईतवार by sanoaawaj
ज्या’न गएको दावी गरेको छ । उनको नि,धनको खबरले गुल्मीमा शोक छाएको छ।भारतीय सेनामा कार्यरत हवल्दार सम्बुर गुरूङले दिनहुँ घरमा फोन गर्थे । उनको श्रीमती बालमाया गुरूङ भने काठमाडौं बस्दै आएकी छन् दिनहुँ जसो श्रीमानसंग उनको कुरा हुनथ्यो।
तर शुक्रबार बिहानै अचानक भएको गो’लाबारीमा उनको ज्या’न गयो।सम्बुरको छोरी इलाले बुवासंग बुधवार बिहान कुरा गरेका बताएकी छन् । शुक्रबार बिहान इला सु’तिरहेकै बेलामा फोन आयो । आमा एक्कासी रु’न थालेपछि इलाले थाहा पाइन् बुवा यो संसारमा हुनुहुन्न ।
उनलाई फोनमा कसैले भन्यो तिम्रो बुबा सहिद हुनुभयो।’ भारतीय सेनामा सम्बुर भर्ती भएको १८ वर्ष पुगेको उनको आफन्तले जनाएका छन्। बुधवार फोनमा कुरा हुँदा अब म दर्शैमा आउछु भनेर भनेका थिए
Posted in Breaking news 1, Breaking news 2, अन्तर्राष्ट्रिय, ट्रेन्डिङ, ताजा अपडेट, व्यक्तित्व
Prevउपत्यका छाड्नेभन्दा भित्रिने यात्रु धेरै
Nextअफगानिस्तानमा गोली चल्यो, एक पत्रकारसहित तीनको मृत्यु